प्रदेश १ मा समुदायमा पुग्यो कोरोनाको संक्रमण, तीन जिल्ला अधिक जोखिममा « epurwa
प्रदेश १ मा समुदायमा पुग्यो कोरोनाको संक्रमण, तीन जिल्ला अधिक जोखिममा
प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०७७, आईतवार १५:२८
विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभामा बजेट अधिवेशनको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गत शुक्रबार ‘कोरोना समुदाय स्तरसम्म पुगिसकेकाले सचेत र सतर्क हुन’ सर्वसाधारणलाई अपिल गरे ।
उनको यो भनाइमा संकटको गाम्भीर्यता प्रस्ट झल्कन्थ्यो । मुख्यमन्त्रीले ‘सरकार एक्लैले गरेर केही नहुने बरु नागरिकको समेत साथ चाहिने’ प्रतिकात्मक सन्देश दिँदै सर्वधारणलाई कोरोनाबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि आह्वान पनि गरे ।
चैत ११ पछिको लकडाउन र त्यसपछि सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टिन, होल्डिङ सेन्टर, कोभिड अस्पताल स्थापना र जिल्लाहरूमा आइसोलेसन सेन्टरको तयारीका कामबारे सदनलाई जानकारी गराए ।
तर, कोरोना नियन्त्रणका लागि अब झन् ठूलो तयारी र सतर्कता जरुरी रहेको भन्दै सचेत पनि गराए । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएका स्थान र तथ्यांक प्रस्तुत गरेनन् । तर, गत बुधबारदेखि नै कोरोनासम्बन्धी आउन थालेका ‘पोजेटिभ केस’ हरूले नै संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिसकेको प्रारम्भिक संकेत भने दिन सुरु भइसकेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेशमा सक्रिय सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्राप्त कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा प्रारम्भिक रूपमा समुदायमा कोरोना पुगेको संकेत मिलेको जनाएको छ । वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सुरेश मेहताले भने, “कतिपय ठाउँमा भेटिएका संक्रमितको स्रोत नखुलेका कारण समुदायमा कोरोना पुगेको हुन सक्ने हाम्रो पनि ठम्याइँ छ तर समुदायमा पुगिसकेपछि जुन गतिमा संक्रमितको संख्था थपिएर जानुपर्ने हो त्यो नभएकाले हामी थप परीक्षण र अध्ययन गरिरहेका छौं ।
समुदायमा गए एकबाट दश र दशबाट सयको दरमा बढ्न सक्छ ।” मेहताका अनुसार मुख्यमन्त्री राईबाट समुदायमा भेटिएका संक्रमितहरूको स्रोतको पहिचान नभएकाले नै ‘कोरोना समुदायसम्म पुगेको’ अभिव्यक्ति आएको स्पष्ट पनि गरे । खासगरी झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनसंख्या, भारत सीमा र तेस्रो देशबाट मानिस आउजाउ हुने लगायत कारणले बढी जोखिमयुक्त मानिएको छ ।
स्रोत नखुलेको संक्रमणले बढ्यो उल्झन !
कोरोनासम्बन्धी शुक्रबारको रिपोर्टमा झापाका २५ संक्रमितमध्ये १८ जना काँकडभिट्टा नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी थिए । अघिल्लो दिनका दुईसमेत जम्मा २० जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । सीमा र नागरिक सुरक्षामा खटिएकै बेला सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुँदा उनीहरू कसरी र कसको सम्पर्कबाट संक्रमित भए भन्ने तथ्य खुल्न सकेको छैन ।
यही साता प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका अधिकृतसहितका थप चारजनामा कोरोना देखियो । अहिले कार्यालयले उच्च सतर्कता अपनाए भर्चुअल माध्यमबाट कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । कार्यालयलाई नै निर्मलीकरण गर्नेसम्मको तयारी भएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता एसपी दीपक पोखरेलका अनुसार उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाएर कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।
सुनसरी इटहरीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका एक थुनुवामा कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि खैलाबैला मच्चियो । राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा गत साउन ४ गते उनलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पछि इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा बुझाइयो । तर, तिनै व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि भयो । उनी प्रहरी कार्यालयमा अरू थुनुवासँगै एउटै कोठामा एक रात राखिए ।
विराटनगर घर भएका ती संक्रमित व्यापारीको गत साउन ६ गते स्वाब परीक्षण भएको थियो । उनलाई मोरङको गोठगाउँस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा पठाइएको छ । थुनुवा र प्रहरीको पीसीआर जाँच गर्ने तयारी थालिएको छ ।
सुनसरीकै इनरुवा नगरपालिका ३, महेन्द्रचोक घर भएका पुरुषमा कोरोना देखियो । प्रशासन र नगरपालिकाले थप जोखिम नलिन पुनः पूर्ण लकडाउन गर्ने निर्णय लियो । संक्रमित पुरुष प्रहरी सेवामा कार्यरत हुन । कोरोना पोजेटिभ पाइएका उनी इनरुवाको मुख्य बजारमा अवस्थित दुर्गा स्टोरमा सरसमान खरिददारी गर्न पुगेका थिए । परिवार र छरछिमकको सम्पर्कमा पनि पुगेका थिए । उनीसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक ट्रेसिङका आधारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले शनिबारै स्वाब संकलन गरिसकेको छ ।
‘समुदाय संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि इनरुवा बजारसहितको क्षेत्रमा पूर्ण लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । संक्रमित पुगेको पसल पनि सिल गरिएको छ । सर्वपक्षीय बैठकले इनरुवाका सबै वडाबाट ‘स्याम्पल टेस्ट’का लागि स्वाब संकलन गर्ने निर्णयसमेत भएको इनरुवाका मेयर राजन मेहताले बताएका छन् ।
विराटनगर अधिक जोखिममा, हेलचेक्र्याईं पनि धेरै
विराटनगर महानगरपालिका समुदायस्तरको संक्रमणको सबैभन्दा जोखिममा छ । जनसंख्या, भारतसँग जोडिएको सिमाना र हेलचेक्र्याईं यसको अधिक कारण मानिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख रमेश कार्कीका अनुसार प्रदेश १ को राजधानीमा घना आवादी छ । जनसंख्याको चाप पनि छ । कार्की भन्छन्, “यहाँ समुदायमा संक्रमण गएको संकेत मिल्न थालेका छन् तर हामीले परीक्षणलाई अझ बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।” भेटिएका कतिपय संक्रमणको स्रोत पहिचान हुन नसक्नुले पनि कठिन हुँदै गएको कार्कीको भनाइ छ ।
विराटनगरमा पछिल्लोपटक विराट अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकलाई नै कोरोना संक्रमण भयो । उनी संक्रमित भएको स्रोत र कारणबारे खोजबिन भइरहेको छ । उपचारका लागि बीपी प्रतिष्ठान धरान गएका उनले शनिबार हेलिकोप्टर चार्टर्ड गराएर काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन् ।
विराटनगरमा हालसम्म एक हजार ७ सय ६९ जनाको पीसीआर परीक्षण भएकामा ३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो सातजनाको ट्राभल हिस्ट्री नदेखिएको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । विदेश नगएका र यतै भएकाहरूमा संक्रमण देखिनुले पनि समुदायस्तरमा कोरोना पुगेको संकेत भएको जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्की बताउँछन् ।
बजार पसल र अस्पतालहरूमा सतर्कता अपनाउन कमजोरी हुने गरेको समेत पाइएको छ । मास्क नलगाईं हिँड्ने, हात नधुने, स्यानिटाइजर प्रयोग नगर्ने र समूहमा बस्ने जस्ता दृश्य विराटनगरमा जताततै देख्न थालिएको छ । महानगर प्रमुख भीम पराजुली भन्छन्, “संक्रमण फैलन रोक्ने काम स्थानीय सरकारको पनि हो तर यसमा उत्तिकै भूमिका नागरिकको पनि हुन्छ । नागरिकले सावधानी नअपनाउने हो भने संक्रमणको दरलाई रोक्न कठिन देखिएको छ ।”
समुदायमा कहाँ–कहाँ पुग्यो कोरोना ?
सबैतिर समुदाय संक्रमणको जोखिम भएपनि प्रदेश सरकारले खासगरी हाल तीन स्थानलाई समुदायस्तरमा कोरोना पुगेका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा प्रवक्ता डा. सुरेश मेहताका अनुसार मोरङमा सुनवर्षी, झापामा कचनकवल, सुनसरीको इनरुवा र काँकडभिट्टा क्षेत्रलाई बढी संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ । कचनकवलमा १३५ जनामा संक्रमण देखिएको छ । उनीहरू सबै भारतबाट आएकाहरू हुन् । कचनकवलको साबिक वडा नम्बर ३ मा गाउँपालिकाकै पहलमा एक चरण समुदायस्तरमा समेत कोरोना परीक्षण भइसकेको छ ।
“नौजनामा परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोना देखिएन,” गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जरा आलमले भने, “समुदायमा गए नगएको हेर्न स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न पठायौं तर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मेहताका अनुसार पहिले यिनै स्थानमा समुदायस्तरमै गएर स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्ने योजनासाथ काम अघि बढाइएको छ । मोरङको सुनवर्षी पनि अधिक संक्रमित फेला परेको नगरपालिका हो । सुनसरीको इनरुवमा भने संक्रमित पुरुषको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा स्वाब संकलनको काम सकिएको र यसको नतिजा आउने चरणमा रहेको बताइएको छ ।
यसबाहेक प्रदेशभरका जोखिमयुक्त भनेर आँकलन गरिएका सहर, गाउँ र बस्तीबाट समेत नमुना स्वरूप स्वाब संकलन गरेर ल्याउने डा. मेहताले जानकारी दिएका छन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार भारतबाट आएका र क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूमा अधिक संक्रमण देखिए पनि त्यो बाहिरकामा समेत देखिनु भने जोखिमपूर्ण हो ।
कचनकवल गाउँपालिकाका प्रमुख आलमले पालिकाले समुदायस्तरमा परीक्षण गर्ने तयारी थालिसकेको जानकारी दिएका छन् । भने, “२५० थान भीटीएम खरिद गरेर स्वाब लिने र प्रदेशलाई पठाउने तयारी गरिसकेका छौं ।” सुनवर्षी नगरपालिकामा फेला परेका १९ जना सबै कोरोना ठीक भई घर फर्किसकेका छन् ।
प्रदेश १ मा कोरोनाको अवस्था
प्रदेश १ मा हालसम्म दुईजनाको मृत्यु भएको छ । ८९१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । तीमध्ये महिला १३८ र पुरुष ७५३ जना छन् । उपचारपछि ठीक भई ११८ महिला र ६१७ पुरुषसहित ७३५ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।
जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा धेरै झापामा ३३९ जना संक्रमित फेला परेका छन् । मोरङमा २२५, सुनसरीमा १२७, उदयपुरमा ८६, धनकुटामा १५, भोजपुरमा ६, खोटाङमा १२, सोलुखुम्बुमा ५, तेह्रथुममा ८, इलाममा २६, पाँचथरमा ६, ताप्लेजुङमा ११ र ओखलढुंगामा १६ जना संक्रमित भेटिएका छन् । अहिले चार जिल्ला कोरोना मुक्त भइसकेका छन् । त्यहाँ कुनै पनि संक्रमण बाँकी छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा शनिबारसम्म ३९ हजार १ सय १२ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।(बाह्रखरीबाट)